Barnaamijyada ugufiican ee socodsiiya oo hagaajiya waxqabadkaaga | Ragga Stylish
Thanks to casriga casriga, ciyaarida isboortiga iyo awooda inaad xakameyso waxaad sameyneyso way fududaanaysaa. Kaliya maahan oo kaliya in lagu cararo oo la arko masaafada aad sameysay iyo waqtiga ay qaadatay. Waxay ka kooban tahay inaad si fiican u ogaato jidka la maray, haddii ay leedahay jiiraad, wadne garaacyo aad soo qabatay, xawaaraha aad ku socotay, iwm. Ogaanshaha dhammaan magacyadan ayaa muhiim ah haddii aan dooneyno inaan si tartiib tartiib ah kor ugu qaadno awooddeena. Si aan ula soconno dhammaan joogtadan maanta waxaan kuu keenaynaa barnaamijyadooda socda ugu fiican. Qaar ka mid ah barnaamijyadan ayaa si aad u wanaagsan ula shaqeeya dugaagado waxqabad.
Ma rabtaa inaad ogaato barnaamijyadooda ugu fiican ee lagula socdo natiijooyinkaaga oo aad naftaada ku horumariso? Sii wad akhriska maxaa yeelay wax walba waan kuu sheegeynaa.
1 Naadiga Nike + Run
Naadiga Nike + Run
Barnaamijkan waxaa loo adeegsadaa kal-fadhiyada socda ee aan dhammaadka lahayn. In kasta oo orodku yahay isboorti aad qaali u ah, haddana haddii aad tababar u socoto tartan waxaa muhiim ah in la ogaado calaamadahaaga si aad uga sarraysid maalin kasta. Barnaamijkan aad ku heli karto ku dhowaad 450 milyan oo saacadood oo tababar ah ayaa la duubay, waxaad awoodi doontaa inaad horumariso noocyadaada inta aad heleyso dhiirigelinta iyo qanacsanaanta isku dayga hal maalin oo dheeri ah.
Abku gabi ahaanba waa bilaash wuxuuna leeyahay barnaamijyo tababar shaqsiyadeed oo kala duwan. Habeynta jimicsiga waa lagama maarmaan maadaama aan ku tiirsan nahay awoodeena jireed. Qofka u ordayay una tababaranayay tartan muddo 2 sano ah lama mid aha kan hadda bilaabaya. Barnaamijyada shakhsi ahaaneed ee barnaamijkan waxay la qabsadaan jadwalo kala duwan si wax kasta oo aad uga shaqeyso aad u badbaadin karto meel jimicsi.
Waad ku mahadsan tahay diiwaannadeeda iyo awoodda ballaaran ee lagu kaydin karo xogta, waxay badbaadin kartaa xawaaraha tartanka, goobta aad ku orday, masaafada, garaaca wadnaha, kalooriyada aad isticmaashay, heerka dhulka aad soo martay, iwm. Sida aad u aragto, waxay si buuxda ula socotaa waxqabadka sidaa darteed, iyada oo og dhammaan xuduudaha, marka xigta ee aan isku dayeyno inaan horumarinno noocyadeena.
Muuqaal aad u wanaagsan ayaa ah in uu yahay barnaamij ku dhiirrigeliya intaad ordeyso. Fariimaha dhiiri galinta ah ayaa soo muuqanaya, waxay kugu wargalineysaa intaad jirtay waxaadna heli kartaa bilado iyo koobab kolba markaad ka badato calaamadahaaga. Waxay sidoo kale isbarbar dhigi karaan xogta iyada oo loo marayo hoggaamiyeyaasha qaarkood. Waa barnaamij si cadaalad ah u dhameystiran oo loo isticmaalo in lagu kormeero dhammaan howlahaaga socda.
Si aad u hesho dhiirigelin dheeraad ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku daabacdo natiijooyinkaaga shabakadaha bulshada sida Instagram ama Facebook si dadka kale ay u arkaan awoodda aad leedahay.
Kani waa barnaamij kale oo soconaya oo aragti wanaagsan ku yeeshay dadweynaha socda tan iyo markii la aasaasay. Fikradaha Google Play Store, waxay leedahay qiimeyn xidig 4,5 ah iyo kudhowaad milyan cod. Barnaamijkani wuxuu ka badan yahay miisaskaaga, waa beel ku wada dhaqan internetka oo aad isku weydaarsan karto khibradahaaga, aad ku xallin karto shakigaaga, su'aalo ku weydiin karto, talona ku weydiin karto, iwm. Way ku habboon tahay isku xirka orodyahanada kale iyo qorista qaar kaa horumarsan adiga. Markaad ka horumarsan tahay kuwa kale, waxaad u baahan doontaa inaad noqotid kan talo bixiya una sheegta tabaha in maalin walba la hagaajiyo.
Waxaan helnaa qorshooyin badan oo diyaarin ah oo ka bilaabma helitaanka taam si loogu tartamo maaratoonka ilaa miisaanka oo yaraada iyadoo qaar orod sameynaya. Way saxan tahay markay tahay cabiraada xogta laxiriirta waxqabadkaaga. Xogta ay cabirayso waxaan kaheleynaa xawaaraha aad ku socoto, waqtiga ay qaadato, heerka dhulka, garaaca wadnaha, iwm. Xogtan waxaa soo uruuriya ficil ahaan dhammaan barnaamijyada.
Waad la wadaagi kartaa goobtaada si aad u xayaysiiso booskaaga haddii ay dhacdo in orodyahanno kale ay rabaan inay ku garab ordaan, waxaad ka heleysaa farriimo taageero ah isticmaaleyaasha kale si ay kuugu dhiirrigeliyaan intaad ordeyso, iwm. Waxay sidoo kale u adeegtaa in laga duubo xogta noocyada kale ee nashaadaadka aan soconayn. Tusaale ahaan, Waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo socodka, baaskiil wadista, barafka iyo xogta socodka.
Waxay leedahay cillado qaarkood sida isticmaalka batteriga oo sarreeya haddii aan ku xirno GPS-ka, waxay leedahay rukhsad qaali ah oo qiimaheedu yahay 9,99 euro oo aan lahayn cod lagu tarjumay Isbaanish. Waxay sidoo kale xoogaa gaabis ah ku socon kartaa qaar ka mid ah qalabka moobiilka.
Waxaad awoodi kartaa ku soo dejiso xiriiriyahan.
Barnaamijkani wuxuu helay xoogaa caan ah sanadihii la soo dhaafay. Waa qalab kormeer firfircoon oo caddaalad ah oo la tartami kara inta kale ee asaageeda ah. Waxaa loo adeegsadaa orodka iyo baaskiil wadida labadaba. Inkasta oo dadka qaar u maleynayaan in aan diirada la saarin wax qabad keliya ay lumiso waxtarka, waxaa fiican in la isku dayo in lagu qanco go'aanka la gaarayo.
Faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah inaan si fudud wax uga qaban karno iyo barnaamij aad u macquul ah. Adoo yeelanaya aaladaha si fudud loo arki karo halka xogta lagu cabiray inta waxqabadyada la arki karo, waa wax fudud in lala macaamilo. Waxay leedahay laba qaybood oo waaweyn oo isboorti ah: orod iyo baaskiil wadid.
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee barnaamijkani u helayo noocyo badan ayaa ugu wacan xulashada socodsiinta qaybaha ay leedahay. Waxay ku saabsan tahay in laguu wargaliyo wixii ku saabsan xogta la helay inta lagu jiro wadarta guud laakiin qaybaha. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad si faahfaahsan u ogaato qayb kasta oo ka mid ah wadarta qaybta aad magacyadoodii ku tagtay. Haddii, tusaale ahaan, qaybta ugu dhaadheer aad xawaarahaaga hoos u dhigtay, heerka garaaca wadnahaaga oo kordhay, iwm. Sidan ayaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad ogaato dhibcahaaga daciifka ah iyo kuwa xoogan ee qayb kasta oo aad u xoojiso si aad u damaanad qaado wadarta guusha ee jimicsigaaga.
Waxay leedahay beel kumanaan isticmaaleyaal ah halkaas oo aad kula wadaagi karto dhammaan noocyada xogta iyo khibradaha. Marka way ku caawin karaan adiguna waxaad ka caawin doontaa xallinta dhibaatooyinka qaarkood.
Dhibaatada barnaamijkani waa haddii aad rabto inaad ku raaxeysato tababarro gaar ah, Waa inaad bixisaa qiimo dhan 6,99 euro bishii.
Samee riix halkan inaad kala soo baxdo.
Sida aad arki karto, inaad awood u leedahay inaad kormeerto astaamahaaga ayaa muhiimad weyn ugu fadhiya isboorti kasta oo ay tahay inaad naftaada ku horumariso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Barnaamijyada socda ee ugu fiican
Taam ku habboon